Ciidamada Kenya iyo kuwa dowlada oo goobo hor oo Jubooyinka ka tirsan la wareegay – idalenews.com
Ciidamada Kenya iyo kuwa dowlada oo goobo hor oo Jubooyinka ka tirsan la wareegay
Ciidamada Raaskambooni, kuwa dowlada Somaliya iyo ciidanka Kenya ee ka tirsan AMISON oo wadajira ayaa la wareegay deegaanno hor leh oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada huwanta ayaa gacanta ku dhigay deegaanka Buulo guduud oo 30 Kiilo Mitir u jirta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, iyo deegaanka Sanguuni oo Kismaayo u jira 45 kiilo mitir.
Ciidamadaasi wadajira ayaa deegaannada kula wareegay si nabadgelyo ah oo aan dhiig ku Daadan kadib markii maleeshiyaadki Shabaab ee ku sugnaa halkaasi ay isaga huleeleen markii ay ka war heleen in ciidamadu u soo dhaqaaqeen xagooda .
Xarakada Alshabaab oo ka talin jirey inta badan koonfurta Soomaaliya ayaa awoodoodii ay hoos u dhacey ka dib dagaalo adag oo jihooyin badan uga furmay, waxaana hadda gacantooda ku harsan gobolka Jubbada dhexe, iyo degmooyinka fara ku tiris ah oo qaar gobalada dalka ka tirsan.
Wasiirka Warfaafinta Somalia Cilmooge oo ka hadley heshiiska Somalia iyo Kenya wada gaareen
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka oo Xalay kormeer kedis ah ku tagey qaar degmooyinka Muqdisho ka tirsan